प्रकाश र मालतीको अन्तरजातीय विवाह, उमेरले बनायो अलग ! – Sodhpatra
प्रकाश र मालतीको अन्तरजातीय विवाह, उमेरले बनायो अलग !
झलझलियाका प्रकाश विश्वकर्मा र मालती रावलको अन्तरजातीय प्रेम विवाह यात्रामा ब्रेक
प्रकाशित : २७ असार २०७८, आईतवार २२:१७ July 11, 2021
कैलाली: कैलालीको भजनी नगरपालिका–४ झलझलियाका प्रकाश विश्वकर्मा र मालती रावलको अन्तरजातीय प्रेम विवाह यात्रामा ब्रेक लागेको छ । उमेरले उनीहरुलाई अलग्याएको छ ।
विवाह गर्न २० वर्ष उमेर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मालती १८ वर्षीया र प्रकाश १९ वर्ष मात्र भएका कारण उनीहरु तत्कालका लागि अलग्गिएका हुन् । प्रहरीले दुवैलाई आ–आफ्नो परिवारको जिम्मा लगाएको छ ।
अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण धम्की आएको दाबी गर्दै असार २५ मा सामाजिक संजाल (ट्वीटर)मा भिडियो पोष्ट गरेपछि उनीहरुले सवैको ध्यान खिचेका थिए ।
भिडियोमा प्रकाशले अन्तरजातीय विवाह गरेपछि परिवारले नमानेको हुनाले जंगलमा आउनुपरेको बताएका छन् । मालतीले भनेकी छिन्–‘हामिलाई धम्की दिएका छन् ।’
असार २३ मा प्रकाशको घरमा बसेकी किशोरीलाई आफन्तले लगेपछि प्रकाशले भिडियो पोष्ट गरेका थिए । रुकुम पश्चिममा भएको घटना दोहोरिने धम्कीपूर्ण म्यासेज आएको जानकारी गराउँदै उनीहरुले जिवन बचाउन अपिल गरेका थिए ।
तर, अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका एसपी विश्व अधिकारीले बताए । एसपी अधिकारीले भने, ‘तत्काललाई उनीहरु सँगै छैनन्, दुवै सुरक्षित छन् ।’
मालतीका आफन्तले उनलाई यातना दिएको दावी गरेपनि त्यस्तो नभएको एसपी अधिकारीले बताए । भिडियो सार्वजनिक भएपछि एसपी अधिकारीले प्रकाशलाई म्यासेज गरेका थिए, ‘भाइ, म कैलालीको एसपी तपाईं नआत्तिनुस् जंगलमा लुकेर बस्नु पर्दैन म उद्दार गर्न आउँछु ।’